ချင်းပြည်ရဲ့နှလုံးသား (သို့မဟုတ်) ဝိညာဉ်တို့ပျော်ရာအရပ် ရိဒ်ရေကန် – YANGON STYLE
ချင်းပြည်ရဲ့နှလုံးသား (သို့မဟုတ်) ဝိညာဉ်တို့ပျော်ရာအရပ် ရိဒ်ရေကန်
ဝိညာဉ်တို့ပျော်ရာအရပ်ဆိုပီး မလန့်သွားပါနဲ့နော် ✌️
စာလေးနဲနဲရှည်မယ့်အတွက် စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ဖတ်ပေးပါနော် ❤️
သဒ္ဓါတို့ သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်ခရီးသွားမယ်စီစဉ်တော့ ချင်းပြည်ကိုရွေးဖြစ်တယ်. ချင်းတောင်ပိုင်း နတ်မတောင်ကျတော့လဲ လူတိုင်းနီးပါးသွားနေကြတော့ ဒီတခါ Adventure ဆန်ဆန်လေးလဲဖြစ်အောင် ချင်းမြောက်ပိုင်း ရိဒ်ရေကန်ကို Galaxy Paradise Travel & Tour နဲ့သွားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်
ပထမဆုံး ရန်ကုန် – ကလေးကားအရင်စီးရပါတယ်
ရန်ကုန်ကနေ ကလေးကိ်ု ညနေ ၃ နာရီ အောင်မင်္ဂလာ
ကားဂိတ်ကနေ စထွက်ပါတယ် ခရီးလမ်းကြောင်းက ပင်ပန်းတဲ့အတွက် Express စီးမယ်ဆို VIP seater များကိ်ုသာ ရွေးချယ်စေချင်ပါတယ် High Class နဲ့ဆိုတစ်ယောက်ကို ၃၃၀ဝ၀ ကျပါတယ်
ရန်ကုန် (အောင်မင်္ဂလာ ကားကွင်း) 09-420225777 , 09-420225888
09-793211170 , 09-793211180
ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 🤩 ရန်ကုန်ကနေ ကလေးကိ်ု ပုံမှန်စီးရင် မနက် ၉ နာရီလောက်ရောက်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ သဒ္ဓါတို့ သွားတော့ လမ်းအခြေအနေမကောင်းလို့ တခြားလမ်းဖက်ကလှည့်လာရလို့ ကလေးကိ်ု နေ့လည် ၁ နာရီမှ ရောက်ပါတယ် 😓 ၂၂ နာရီလောက်ကားစီးလိုက်ရပါတယ်
ကလေးရောက်ရင်တော့ ကားကို တည်းမယ့် ဟိုတယ် ရှေ့ပဲရပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ် သဒ္ဓါတို့ကတော့ Hotel GBH မှာတည်းဖြစ်ပါတယ် ဈေးကတော့ ၃၀ဝ၀ဝ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပါတယ်
ပထမရက်မှာတော့ ကလေးမြို့တွင်းလည်ပတ်ပြီး hotel မှာပဲ တစ်ညအိပ်ခဲ့ပါတယ်
မနက် ၇ နာရီလောက်မှာ ဟိုတယ် breakfast စား ရေမိုးချိုးပြီး အထုတ်များသိမ်းဆည်းကာ ရိဒ်ရေကန်ရှိရာသို့
ဟိုတယ်ရှေ့တွင် လာခေါ်သောကားဖြင့် ချင်းတောင်တန်းများဆီသို့ ခရီးဆက်ကြပါတယ်
မနက် ၈ နာရီခန့်တွင် စထွက်ပြီး မနက် ၉:၁၀ မိနစ်ခန့်တွင် ၆၂၅၀ ပေမြင့်သော သိုင်းငင်ရွာသို့ရောက်ရှိပါတယ်
သိုင်းငင်ကျော်ရင် ပိုလှတယ်လို့ဖတ်ဖူးတော့ တကယ်ပါကွာ
ကြာကြာမရပ်နိုင်ပါဘူး လေတိုက်ပြီး အေးလွန်းလို့ပါ 🤩 ဓာတ်ပုံတွေ ရှယ်ရိုက်ပါလိမ့် ပါးစပ်အဟောင်းသားပဲ😁
လေထန်ကုန်းကနေဆက်လာရင် တီးတိန်မြို့လေးကိုရောက်ပါတယ် တီးတိန်မြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး နေ့လည်စာစားဖို့ရပ်ပါတယ်
ချင်းတောင်ဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း စားစရာဟင်း
ကတော့ ရေလုံပြုတ်တွေကြီးပါပဲ 🤦🏻‍♀️ မတတ်နိုင်ဘူး ကြက်ဥကြော်လေးမှာပီး စားရတာပေါ့
ပီးတော့ တီးတိန်ကော်ဖီနဲ့ ချင်းဒိုးနတ်ဆိုတာကြီးကို အချိုတည်းစားကြည့်ခဲ့ဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော် 😁
ကဲ နေ့လည်စာလဲစားပြီးပြီဆိုတော့ ရိဒ်ရေကန်ကို ထပ်ပီး ခရီးဆက်ပါတယ်. စပါပြီ🙄 စားထားသမျှအစာတွေ
စပြီးကြေပါပီနော် ဂလုံဂလွမ် နဲ့ လမ်းကြမ်းကြီးကို စမောင်းပါပြီ 😭 မံဆောင်းတံတားဆီသွားဖို့ တောင်အဆင်းလမ်းကိုမောင်းပါတယ်
တံတားတဖက်ခြမ်းက တောင်တက်လမ်းကိုပြန်မြင်နေရပါတယ် ကြည့်ရတာ လှသလောက် တော်တော်လေးကိုပင်ပန်းပါတယ်
၁ နာရီလောက်ဆင်းပြီး မဏိပူရမြစ်ကို ဖြတ်ပြီးထိုးထားသော မံဆောင်း ကြိုးတံတားတွင် ဓာတ်ပုံဆင်းရိုက်ကြပါသေးတယ် (မပင်ပန်းနိုင်သေးဘူး🤧😛)
တံတားဖြတ်ပီးတော့ စတက်ပါပြီ ခုနကမြင်ခဲ့ရတဲ့ လှလိုက်တာ လှလိုက်တာ ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့တဲ့ တောင်တက်လမ်းလေးကို 🤐
သဒ္ဓါဆို ဝိတ် ၃ ပေါင်လောက်ကျသွား မယ်ထင်တယ် 😫 သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့် ချင်းမြောက်ပိုင်းကို သိပ်ပီး အလည်မလာကြတာပါလားလို့
တောင်ပေါ်ခေါင်ရည်ချိုမြမြ* ဆိုတဲ့ သီချင်းကို Down သွားပါ 😂 တကယ် ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး လမ်းတလျှောက်
လွိုင်တီးဆိုတဲ့ရွာလေးကိ်ုရောက်ပါတယ် ခဏလောက်နားပြီး ထပ်သွားကြပြန်တယ်
ညနေ ၃ နာရီခွဲလောက်မှာတော့ ရိဒ်ရေကန်တည်ရှိရာ ရိဒ်ခေါဒါမြို့လေးကိ်ုရောက်ရှိ်ခဲ့ပါပြီ😍
မြို့ထဲကနေ ၁၀ မိနစ်လောက်ထပ်မောင်းရင်တော့
ရိဒ်ရေကန်ကြီးကိ်ုရောက်ရှိပါပြီ 🤩 ရေကန်တွေ့လိုက်တာနဲ့ ပင်ပန်းထားတာသမျှ မောပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ
ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိ အော် ရိဒ်ရေကန်ဆိုတာ
ကားပေါ်ကဆင်းတာနဲ့ ရေကန်ကြီးဆီပြေးတော့တာပဲ ❤️ ပီးတော့ ကန်ဘေးမှာရှိတဲ့ ဘန်ဂလိုလေးတွေမှာ
အထုတ်တွေချ ရေမိုးချိုးပြီး ရိဒ်ရေကန်ကို အပေါ်စီးကမြင်ရမယ့် view point ကိုသွားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်.
ညနေစာကိ်ုတော့ ကန်ဘေးက ရိဒ်ကန်သာ ဆိုတဲ့
တစ်ဆိုင်တည်းသော စားသောက်ဆိုင်လေးမှာဝင်စားကြပါတယ် ဈေးလဲအရမ်းမကြီးပါဘူး
တစ်ခုရှိတာက ကန်ဘေးမှညအိပ်ဖို့ ဘန်ဂလိုက ၇ လုံးပဲရှိပါတယ် တစ်လုံးကို အခန်း ၂ ခန်း နဲ့ တစ်ခန်းကို
၂ ယောက်ပဲနေလို့ရတော့ သွားလည်တိုင်းအဲ့မှာပဲ
တည်းရမယ်လို့ အာမ မခံပါဘူးနော်😪
ဘန်ဂလိုက မီး ၁၀ နာရီလောက်ဆိုဖြတ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ရိဒ်ခေါဒါမြို့ထဲက ရိဒ်ရွှေပြည်ဆိုတဲ့ Guest House လေးမှာတည်းလို့ရပါတယ် ကန်နဲ့သိပ်မဝေးပါဘူး😍
ကဲ ညနေစာလဲစားပြီးပြီဆိုတော့ ကန်ဘေးမှာ မီးပုံပွဲလေးလုပ်ကြပါတယ် 🔥🌈
Galaxy Paradise ကအကုန်စီစဉ်ထားပြီးသားပါ
နွားနောက်သားကြော်နဲ့ တောင်ပေါ်ခေါင်ရည်ချိုချိုလေးပါ Free တိုက်ပါတယ် 🤩
အမလေးနော် သဘာဝရဲ့အရသာကို ကန်ဘေးမှာ
လမင်းကြီးကထိန်ထိန်သာလို့ မီးပုံလေးနဲ့ ဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်ပြီး ဂစ်တာလေးတီး သီချင်းလေးဆို ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် တော်တော် စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းနေပါပြီ😇😇😇
သဒ္ဓါကတော့ အိပ်ပစ်ရမှာ နှမျောလို့ တညလုံး ထိုင်ပြီး ကြယ်တွေကြည့်ပြီး သီချင်းလေးနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်
(အမှန်တော့ ရိဒ်ရေကန် သမိုင်းဖတ်ပြီး သရဲကြောက်လို့
မနက်ကိုတော့ ၆ နာရီလောက်ထပြီးရေကန်ဘေးကိုသွားကြည့်ပါ 🤭 ညနေတုန်းက မြင်ခဲ့ရတဲ့ ရေကန်ကြီးနဲ့မတူ
တော့ပဲ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ပင်လယ်ကြီးရောက်နေသလိုပဲ မြူတေအပြည့်နဲ့ 😍😍 ရန်ကုန်ကယူလာတဲ့ အနွေးထည်လှလှ
လေးတွေနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းပါလိမ့် 🤩✌️
ရာသီဥတုလေးကတော့ ရေမချိူးနိုင် 😜 အလှလေး
ပြင်ပြီး ဓာတ်ပုံပတ်ရိုက်ပေါ့ 🤭
ရိဒ်ရေကန်ရယ် ဒီလို အဆင့်ဆင့်လာရတာ အရမ်းတန်တာပဲလို့ အဲ့တော့မှသိလိမ့်မယ် 🤗 ရေကန်ထဲက ရေကိုအမှတ်တရ ဘူးလေးနဲ့ထည့်ခဲ့နော်
အားလုံးပြီးတော့ မနက် ၈ နာရီလောက် မနက်စာစား ၉ နာရီလောက် အထုတ်တွေသိမ်းပြီး ကားပေါ်တင်
View point ဆက်သွားအုပ်စုလိုက်ပုံတွေရိုက် ဘာ Goal ည Goal တွေရိုက် ကားခေါင်မိုးပေါ်ပါတက်ရိုက်😛
အပြန်မှာတော့ ရိဒ်ခေါဒါ မြို့ရဲ့ တဖက်ခြမ်း မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်စပ်မြို့လေး ဖြစ်တဲ့ Zokhawdar (ဇိုခေါဒါ) မြို့လေးကို ခဏလောက်သွားလည်ကြပါတယ်
ဟိုဘက် ဒီဘက် ကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်နေကြတဲ့
မီဇိုရမ်လူမျိုးများနှင့် ရှုပ်ယှက်ခက်နေပါတယ် စောစောသွား
နိင်မှ လူရှင်းပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာကောင်းပါမယ်
မနက် ၁၀ နာရီလောက်မှာတော့ ရိဒ်ခေါဒါမြို့လေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီး အလာလမ်းအတိုင်းပြန်ကာ လွိုင်တွီးရွာလေးမှာ ထမင်းစားပြီး တီးတိန်မြို့ ရှောင်ဇောင်းစံပြ
ရှောင်ဇောင်းစံပြကျေးရွာလေးက ဆေးလိပ် အရက် မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်ပြီး ဟိုးခေတ်က ရှိခဲ့တဲ့ ချင်းရိုးရာအိမ်လေးလည်းရှိပါတယ်
ရိုးရာအိမ်သွားရင် အိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကအစ အကုန်ရှင်းပြပေးပါတယ် 💛
ထို့နောက် တီးတိန်မြို့လေးကနေ ပြန်ထွက်ခွာခဲ့ပြီး
ချင်းပြည်နယ်၏ ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သော ကနေဒီတောင် သို့ခရီးဆက်ကြပါတယ်
နေ့လည် ၁ နာရီခွဲလောက်မှာ ကနေဒီတောင်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြါ့ပီ🤗
Soft hiking လေးတက်လို့ရပါတယ် ကိုယ်တက်နိုင်သလောက်ပေါ့ ဒီဇင်ဘာ, ဇန်နဝါရီသွားရင်တော့ တစ်တောင်လုံး တောင်ဇလပ်ပန်းနီနီရဲရဲများကိုတွေ့ရမှာပါ သဒ္ဓါတို့ကတော့ လူညီလို့ အပေါ်ဆုံးထိတက်ခဲ့ပါတယ် လုံးဝ အမေးဇင်းပါ ချင်းတောင်တန်းတွေဆိုတာ ကလောဖက်က တောင်တွေနဲ့တောင်မတူပါဘူး အရမ်းရမ်းလှပါတယ် ❤️
ချင်းရိုးရာအထည်နဲ့ accessories တွေတို့ကို Tahan Thu Chin Traditional Shop
ဆိုတဲ့ လက်ဆောင် ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ
ဝယ်လို့ရပါတယ် စိတ်ရှည်ပြီးအကုန် ထုတ်ပြပါတယ် 😁🤗
☑️ အနွေးထည်ထူထူလိုပါတယ် ရိဒ်မှာချမ်းပါတယ်
☑️ ဓာတ်မီးလေးယူသွားပါ မီးကတစ်နေကုန်မရပါဘူး
☑️ လက်အိတ်, ခြေအိတ်, ခေါင်းစွပ် (သို့) ဦးထုပ်
တောင်တက်ဖို့ Shoe ဖိနပ်
☑️ လွယ်အိတ်အသေးလေးတွေပါရင်ပိုကောင်းပါတယ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး backpack 🎒 လေးတွေယူသွားပါ
☑️ ပါဝါဘန့် အရေးကြီးဆုံးပဲနော် 😝
✖️✖️အမှိုက် လုံးဝ လုံးဝ ပစ်မချပါနဲ့
ပန်းလေးတွေလျှောက်ခူးပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပစ်မထားခဲ့ပါနဲ့ ✖️✖️✌️
ကဲ သူများတွေမသွားခင် ချင်းမြောက်ပိုင်းက ရိဒ်ရေကန်လေးကိ်ု ဆောင်းတွင်းမကုန်ခင် သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး အလှအပများကိုခံစားနိုင်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
Galaxy Paradise Travels and Tours
Contact -09340043558, 09424264052
Blogger မဟုတ်တဲ့အတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာ သည်းခံပြီး ဖတ်ပေးကြပါနော် စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းသာရေးရရင် ပိုရှည်မိမှာ 😁😁
လွတ်လပ်စွာ Share နိုင်ပါတယ်✌️✌️✌️❤️
TD’s Travel Notes📝
It’s called Heaven??
နောက်က ဘန်ဂလိုလေးတွေ 💛
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၅၆၆၇ ပေမြင့်သော
အောက်မှာ ရိုးရိုးကျောက်သင်ပုန်းတွေကို ကြွေပြားအဖြစ်ခင်ထားတဲ့ အိမ်လေး
ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေထဲက အရမ်းချမ်းသာတဲ့လူကြီးတယောက်ယောက်ရဲ့အိမ်ပေါ့ အရင်ကဆို အရမ်းချမ်းသာမှ ဒီလိုအိမ်ဆောက်တာတဲ့
ရှောင်ဇောင်းရွာက ကလေးတွေစီးတဲ့ သစ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ချား
ဆိုင်ကယ်, ကားအလာကိုမကြောက်မရွံ လမ်းမလယ်ထိုင်ကာ ပဲပေးနေသူ😂
😜😜 အကျီက စာကိုဖတ်ကြည့်နော်
ခရီးသွားရင်း အဲ့လို အိတ်လေးလွယ်ချင်ရင်တော့
Burmesevispo Clothing ပိုင် ဘုန်းသွင် ဆီမှာ မှာလို့ရပါတယ်
လမ်းကြမ်းရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့မလွယ်ဖူး ခုန်နေလို့
မံဆွောင်းတံတား အတက်လမ်း ကြည့်တာတော့လှတယ်
ရောက်တော့မှ ဝိတ်ပါကျမယ် 😂
တောင်ဇလပ်ပန်းပွင့်ချိန်ဆို တစ်တောင်လုံး နီရဲနေတာတဲ့
နွားနောက်သား, ကြက်သားသုပ်, သီဟိုဠ်စေ့
Galaxy Paradise Travels
Tahan Thu Chin Traditional Shop ✌️